मोटोपन सम्झेर नगर्नुहोस् वेवास्ता, पेट पुट्ट लाग्नु हुनसक्छ यस्तो रोगको संकेत!!! – News Nepali Dainik
मोटोपन सम्झेर नगर्नुहोस् वेवास्ता, पेट पुट्ट लाग्नु हुनसक्छ यस्तो रोगको संकेत!!!
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १९, २०७७ समय: १७:०९:३७
काठमाडौँ । हामीले शरीरमा देखिएका परिवर्तलाई सामान्य सम्झिएर वेवास्ता गर्ने गर्छौँ । तर ती परिवर्तन कहिले काही स्वास्थ्यका लागि घातक बन्न सक्छन्।
त्यस्तै पेट लाग्नुलाई पनि धेरैले मोटोपन सम्झिएर वेवास्ता गर्ने गर्छन्। तर पेट पुट्ट लाग्नु मोटोपनको मात्र कारण नहुनसक्छ। मोटोपन हुनु वा फैलिनुको पछाडि के कारण हुनसक्छ भन्ने बारेमा आज हामी जानकारी दिदैछौँ ।
आउनुहोस् जानौँ के कारणले लाग्छ पेट ?
१) शरीरमा हर्मोनको ब्यालेन्स बिग्रियो भने पेट लाग्ने समस्या देखिन्छ। अर्को कारण हर्मोन एकै ठाउँमा स्थिर रह्यो बने पनि मोटोपन बढ्ने गर्छ। मोटोपन बढ्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिदैन्।
२) महिलाको पाठेघरमा प्रायः क्यान्सरको समस्या देखिने गर्छ। यदी महिलामा पाठेघरको क्यान्सर हुन लागेको छ भने पनि पेट लाग्ने गर्छ। त्यसैले तपाई अचानक मोटाउनु भयो वा पेट लाग्यो भने त्यसलाई वेवास्ता नगर्नुहोस् ।
३) एक आइबीएस नामको संक्रमण हुन्छ । जसका कारण पेटमा भएका ब्याक्टेरिया आवश्यकता भन्दा बढी संवेदनशील हुन थाल्छन्। यस संक्रमणले तपाईलाई असर पुर्याउने गर्छ। त्यसैले पेट बढ्यो भने त्यसलाई समान्य सोचेर वेवास्ता नगर्नुहोस्।
४) अटो इम्युन डिसअर्डर नामको रोगका कारण पनि पेट लाग्ने समस्या देखिन्छ। यसले शरीरका बलिया र स्वास्थ कोशियालाई नोक्सान पुर्याउने काम गर्छ। जसका कारण शरीरमा विस्तारै थकावटको महशुस हुन थाल्छ। त्यसैले यस्तो समस्यालाई वेवास्ता नगर्नुहोस् ।
कसरी घटाउने त मोटोपन ?
दिनको सुरुवात कागती पानीबाट
* बिहान १५ देखि २० मिनेटसम्म आफुलाई सहज हुने हिसाबले दौडनुपर्छ ।
* १५ मिनेट जति व्यायाम गरौ । योग गरौ ।
* दिनभर कार्यलयमा बसेपनि सानोतिनो शारीरिक काम आफै गर्नुपर्छ । अर्थात निस्त्रिmय बस्नु हुन्न ।
* एकसाथ धेरै खानेकुरा सेवन नगरौं । एक पटकमा थोरै थोरै खानेकुरा सेवन गरौ । बरु, धेरै पटक सेवन गरौ ।
* खानामा साग र सलादको मात्रा अत्याधिक हुनुपर्छ ।
* मासुजन्य पदार्थ, दुधजन्य पदार्थ, जंक फूड, मसलेदार, तारेको खानेकुरा सेवन नगरौ ।
* सकेसम्म उसिनेको खानेकुरा सेवन गरौ । साग सब्जी उसिनेर सेवन गरौ ।
* खाना खानसाथ सुत्ने वा दिउँसो सुत्ने गर्दै नगरौ ।
* सकेसम्म राती अबेरसम्म नबसौ । राती छिटै सुत्ने र बिहान चाडै उठ्ने बानी गरौ ।
Last Updated on: February 1st, 2021 at 5:11 pm
४१४० पटक हेरिएको